नयाँ वर्ष २०२१ मा चम्किदैछ कर्कट, सिंह, कन्या, धनु र मीन राशिको भाग्य – Gazabkonews
नयाँ वर्ष २०२१ मा चम्किदैछ कर्कट, सिंह, कन्या, धनु र मीन राशिको भाग्य
नयाँ वर्ष २०२१ मा चम्किदैछ कर्कट, सिंह, कन्या, धनु र मीन राशिको भाग्य, अन्यको कस्तो ?
काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०२१ ले धेरै राशिका मानिसका लागि खुशी उपहारहरू ल्याउन सक्छ। ज्योतिषीहरूका अनुसार, २०२१ मा यी पाँच राशिका व्यक्तिहरू धेरै भाग्यशाली हुनेछन्।
यस वर्ष कर्कट, सिंह, कन्या, धनु र मीन राशिका व्यक्तिका लागि नयाँ वर्ष धेरै प्रकारले लाभदायक साबित हुनेछ।
धन र आयका स्रोतहरूले मात्र यी राशिहरूमा वृद्धि हुने छैन, परिवारमा खुशी र शान्तिको वातावरण पनि हुनेछ। आउनुहोस् जानौँ नयाँ वर्ष २०२१ का लागि १२ राशिको भाग्यफल कस्तो रहनेछ ? पूरा जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस्
कलंकी जाने भनेर मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍याइन्
काठमाण्डौ । कुनै सुन्दर युवतीले लिफ्ट मागिन् भनेर मख्ख पर्दै लिफ्ट दिँदा समस्यामा पर्न सकिन्छ । एक युवतीलाई सहयोग गर्ने भन्दै लिफ्ट दिँदा सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका २ का भोलाबहादुर जर्घामगरले नसोचेको घटना भोग्नु परेको छ ।
सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका २ का भोलाबहादुर जर्घामगरलाई एक युवतीले मागेपछि उनले उक्त युवतीलाई लिफ्ट दिए । युवतीले आफुलाई कलंकी जानु पर्नुेभन्दै लिफ्ट मागेको हुनाले र भोला बहादुरलाई पनि कलंकी नै जानु पर्ने हुनाले बाटो र पुग्ने ठाउँ एउटै भएपछि भोलाले ती युवतीलाई आफ्नो मोटरसाईकलमा बसाले ।
यो गत साउन ८ गतेको कुरा हो । जतिबेला भोला काठमाण्डौको रत्नपार्कमा थिए । सोही रत्नपार्कबाट युवतीले कलंकी जानकोलागी लिफ्ट मागेकी थिईन् । रत्नपार्कबाट भोलाले ती युवतीलाई कलंकी पुर्याइदिए । कलंकी पुर्याई दिएपछि आफ्नो मोटरसाईकलबाट झर्न भनेका भोलालाई ती लिफ्ट माग्ने युवतीले कलंकी नभई चोभारसम्म पुर्याई दिन फेरी अनुरोध गरिन् । भोला साँच्चैको भोला रहेछन् ।
उनले ती युवतीलाई अप्ठ्यारो नै परेको होला भन ठानेर चोभारसम्म पुर्याए । जब भोला ती लिफ्टेड युवतीलाई लगेर चोभार पुगे तब ती युवतीले आफुलाई अन्य दुई जना युवा भएको ठाउँमा मोटरसाईकल रोक्न भनिन् । भोलाले ती युवतीको कुनै दाजुभाई वा साथीहरु होलान् भन्ने लागेर ती दुईजना युवक भएको ठाउँमा मोटरसाईकल रोक्दा भोलालाई तिनीहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । उनीहरूले भोलाको साथमा रहेको ६ तोला सुनको सिक्री, मोबाइल, चश्मा र सात हजार रुपैयाँ पनि लुटे ।
आफु लुटिएपछि भोला महानगरीय अपराध महाशाखामा उजुरी गर्न गए । त्यही उजुरीको आधारमा महाशाखाले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका ३ घर भई काठमाडौं स्युचाटार बस्ने ४९ वर्षीय लालबहादुर श्रेष्ठ रहेको महाशाखाले जनाएको छ । घटनामा संलग्न युवती र अन्य व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको परिसर प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले बताए । पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा बुझाइएको उनले बताए ।
यो पनि : ७१ लाख नगद लिएर श्रीमतीलाई छोडेर श्रीमान् फरार
बलेवा: विदेशको कमाइ कुम्ल्याएर श्रीमान् फरार भएको भन्दै एक महिलाले श्रीमान्को खोजी गरेकी छिन् । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराकी एक महिलाले सरोकारवालालाई खोजी गरिदिन अनुरोध गरेकी हुन्। श्रीमान् प्रेम पौडेलले जापानमा रहँदा आफूसमेतले कमाएको रकम बोकेर फरार भएको भन्दै सरीता सुवेदी पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ र आप्रवासी स्रोत केन्द्र बागलुङलाई अनुरोध गरेकी हुन्।
बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थान माइतीघर भएकी सरीता र प्रेमबीच विसं २०६७ मा परम्परागत विवाह भएको थियो । “जापान पुगेपछि दुई वर्षको भिसा लगाइदिए, काम पनि थालेँ, तर कमाइ मैले राख्न पाइनँ”, उनले भनिन्, “कु टपि ट गरेर सबै पैसा लगेपछि म शरणार्थी बन्नुपर्यो ।” उनले जापान पुगेदेखि नै सम्बन्ध राम्रो नभएको बताए ।
एक्कासी के भयो गायक पशुपति शर्मालाई ? परिवारका सदस्य हेरेको हेर्यै भए
लोक संगीत क्षेत्रमा एकछत्र राजा गर्न सफल गायक अनि सर्जक पशुपति शर्मा को समय सान्दर्भिक लोक गित बजारमा सार्बजनिक भयको छ। उनको जता नि चोर…बोलको शर्माको पछिल्लो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको थियो ।
उनले यसअघि ल्याएको “लुट्न सके लुट” गीतका केही दृश्य र शब्दका कारण विवादति बनेको थियो । यस गीतमा पनि पशुपति शर्माले नेपालको राजनीति, प्रशासन क्षेत्रमा रहेको विकृतिको कुरा उठाएका छन् । उनले नेपाली समाजमा रहेको विकृति, काम नगर्ने तर हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति आदिलाई पनि ब्यङ्ग्य गरेका छन् ।
विश्व भरि कोरोनाको त्रा:स संगै थुप्रै मानिसहरुको मृ’त्यु भैसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आफुलाई कोरोना संक्र’मण भैसकेपछि आफ्नो दिमाख मा के के कुरा खे’ल्छन त ? त्यस्तै शब्दह:रुलाई जोडेर मन छुने गित निर्माण गरेका छन्।
गायक पशु’पति शर्माको सुमधुर आवा’जमा उनै बहुप्रति’भाशाली कलाकार पशुपति शर्मा को लय तथा शब्द सिर्ज:नामा पशुपति शर्माकै लोक दोहोरि एल्बम मा मरे भने बजा:रमा सार्ब’जनिक भयको छ।
भिडियो तर्फ दुर्गा पौ’डेलले छायांकन तथा निर्देश’न दुवै पाटो सम्हालेका छन् भने नबिन घर्ति मगरले उत्क्रिष्ट भि’डियो सम्पादन गरेका छन्।
उक्त भिडि’योमा पशु’पति शर्मा र सगुन शाही’को मन छुने अभिनय रहेको छ। उक्त भिडियो पशुपति शर्माकै आधिका:रिक युटुब च्यानल मार्फत बजारमा सार्बज:निक गरियको छ।
नेपाली चेली एलिसा र घनाका युवक डेनिसबिचको अनौठो मायाप्रेम र विबाह हेर्नुहोस् भिडियोमा
भनिन्छ; “सुन्दरता संग गतिने प्रेम उमेरले मेटाइदिन्छ अनि धनी संग गरिने प्रेम समयले सकाइदिन्छ । तर मन संग गरिने प्रेम संधैभरी रहिरहन्छ ।”
आजभोली एउटा स्त्रीले हेरविचार र भावना बाट प्रेमको महशुस गर्छिन भने एउटा एउटा पुरुषले स्वकृति र स्पर्शबाट प्रेमको महशुस गर्छ र यहि भिन्नतालाई नबुझ्नाले आजभोलिको प्रेम सुरु हुनुभन्दा पहिलेनै सकिन्छ । कतिपय चोखो प्रेममा न’त रुप हेरिन्छ, न त रंग नै हेरिन्छ । तर यो प्रेममा मन त अवस्य नै हेरिन्छ । हो यस्तै मन संग मन मिलेको जोडी सामाजिक संजालमा थुप्रै देख्न सकिन्छ ।
तीनै मध्यका एक जोडी हुन नेपाली चेली एलिशा कुँवर र अफ्रिकी देश घानाका युवक याओ डेनिस ।केही समय अघि यो जोडी सामाजिक संजाल विशेषगरि टिकटमा निकै नै रुचाइको जोडी थियो र अहिले पनि छ । विशेष गरि २०७७ सालको दशैको समयमा उनीहरू टिकटकमा निकै नै भाइरल हुन पुगे । हाम्रो पहिलो दशै भनेर एलिशाले उक्त भिडियो अप्लोड गरेकी थिइन ।उनीहरूको भिडियो लाखौंले हेरे त्यस्तै सेयर पनि हजारौंले गरे । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने उनले अप्लोड गरेको दुई ओटा भिडियोमध्ये एउटाम २९ लाख र अर्कोमा २७ लाख भ्युज कमाइसकेको छ । त्यस्तै यी दुई भिडियोमा लगभग २/२ त लाइक मात्र रहेको छ ।
विशेष गरि श्रीमान याओ डेनिसले श्रीमती एलिशालाई दशैमा टीका लगाइदिरहेको भिडियो एकाएक भाइरल हुन पुगेको थियो । त्यस्तै उनको यस भिडियोलाई हेरेर हजारौंले एकदमै राम्रा राम्रा प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । उनको भिडियोमा गरेका प्रतिक्रियाहरु यस्ता थिए १.कालो रुप सवैले देखे तर उसको सफा मन कसैले देखेना नेपाली संस्कार लाई मनले मानेको देखेन ।२.जुनै देशको नागरिकसँग बिहे गरेपनि आफ्नो धर्म संस्कृति बचाउनु र सिकाउनु नै तपाईंको ठूलो महानता हो ।
३. खुसि रहनु बैनी,अरु ले जे भनुन आफ्नो जीवन हो आफुले बाच्ने हो,हजुर् खुसी रहे हामी सारा नेपाली खुसी छौ आशीर्वाद छ।अब प्रस्तुत छ भिडियो सामाग्री